theZOMI: [mrsorcerer:38243] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] ဆေးကျောင်းသူတစ်ယောက်ကို ကြိုက်မိမယ်ဆိုရင် ….ရေးသင့်သော ရည်းစားစာ…:P
[mrsorcerer:38243] Fwd: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] ဆေးကျောင်းသူတစ်ယောက်ကို ကြိုက်မိမယ်ဆိုရင် ….ရေးသင့်သော ရည်းစားစာ…:P
Subject: [လူဗိုလ်ဟူသည် ...] ဆေးကျောင်းသူတစ်ယောက်ကို ကြိုက်မိမယ်ဆိုရင် ….ရေးသင့်သော ရည်းစားစာ…:P
လင်း သက် shared Today Myanmar's photo.
ကိုယ့်ရဲ့ vitamin လေး သိစေရန်..။
မင်းရဲ့ anatomy နဲ့ physiology တွေအဆင်ပြေရဲ့လား..(မင်းနေကောင်းကျန်းမာရဲ့လား)
ကိုယ့်ရဲ့ biochemistry တွေလည်း normal limits အတွင်းဝင်ပါတယ်(ကိုယ်လည်း ကျန်းမာပါတယ်..ပေါ့ :P )
Ischaemic heart က blood supply ကို တမ်းတမ်းတတ လွမ်းဆွတ်သလို ကိုယ်လည်း မင်းကို နင့်နင့်နဲနဲ လွမ်းနေမိတယ်..
mycobacterium tuberculosis က the apex of lung ကိုချစ်တာထက်တောင် ကိုယ့်အချစ်က ပိုပါတယ် ကလေးရယ်….
ဖြစ်နိုင်ရင် post-operative patients ကို I.V Cefotaxime sodium & Metronidazole care ပေးရသလို မင်းဘ၀တစ်လျှောက်လုံးကိုလည်း care ပေးပြီး ပြုစုချင်မိလေရဲ့..
ကိုယ့်ရဲ့ S.A node မှာ မင်းကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားလိုက်ပြီမို့ ကိုယ့် heart failure ရဲ့ etiology က မင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဆုတောင်းနေမိတယ်…
ကိုယ့်အချစ်တွေကို mortor နဲ့ pestle ထဲထည့် ၊ fine powder ဖြစ်အောင်လုပ် ၊capsule ထဲထုပ်ကာ ပေးလိုက်ပါ့မယ်…လိုတဲ့ dose အတိုင်း သောက်လှည့်ပါနော်.. FOC ပါကလေးရယ်…P.r.n အဖြစ်သုံးလှည့်ပါ.. မင်းအတွက် side effect မဖြစ်စေရပါဘူး. :P
တစ်ခါတစ်လေ တော့ကိုယ်ကြောက် မိတယ်.. မင်းကို ချစ်ရတာ pharmacognosy MCQ ဖြေရသလိုပဲလေ..မှားရင်က နှစ်မှတ်လျှော့..မဖြေရင်ကတစ်မှတ်လျှော့ မှန်ပြန်တော့ တစ်မှတ်ပဲရတယ်မဟုတ်ပါလား….
မင်းစစ်တဲ့အချစ်စာမေးပွဲမှာ ကိုယ် round မ ထိချင်ဘူးကွယ်…
အချစ်သင်ခန်းစာ မကျေခဲ့တဲ့ ကိုယ့်ကို2nd attempt လေးနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် super supply လေးနဲ့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အအောင်ပေးလှည့်ပါ…
မင်းနဲ့ ချစ်သူဖြစ်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင် မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ ceutics တွေကိုတောင် (ရေဘူးထောင်ပြီး )၀ိုင်းကူ ကျက်ရဲပါတယ်.. မင်းလုပ်တဲ့ laxative suppository မှာ အစမ်းသပ် ခံအဖြစ် နေပေးဝံ့ပါတယ်…။မင်း suppy ထိတဲ့အခါ ၀ိုင်းအော်ငိုပေးပါ့မယ်..။ viva တွေဖြေတဲ့အခါ အခန်းအပြင်ကနေ စာရွက်အကြီးကြီးနဲ့အဖြေကို ရေးပြပါ့မယ်..
မင်းသာမချစ်ဘူးဆိုရင် လောကကြီး က QC pass မဖြစ်တဲ့ paracetamol ကြီးလို အသုံးမ၀င်ပဲ ၊ allergic ဖြစ်တဲ့သူမှ သောက်မိတဲ့ penicillin ကြီးလို anaphylaxis ဖြစ်စေကာ ၊ နို့သောက်ပြီးမှ ပေးမိတဲ့ antibiotics ကြီး တွေလို အာနိသင်မရှိတော့မှာ အမှန်ပါပဲကွာ….
ကိုယ့်ကို -ceutics တစ်မျက်နှာစာလောက်…
-nosy မှာမင်း ဓားသေးသေးလေးနဲ့ခွာရတဲ့ သစ်ရွက်လေးတွေအပေါ် ဂရုစိုက်မှုလောက်..
-P'chem ခန်းထဲမှာ မင်းလက်နဲ့ထိတွေ့ချိန်တွယ်နေတဲ့ ဆေးပြားသေးသေးလေးတွေလောက်..
-Pharmaco project ချိန်မှာ မင်း ရှင်းပြနေတဲ့ interaction လောက် ဂရုမစိုက်ရင်နေပါ…
မင်းရင်ရဲ့တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှာတော့ molecule တစ်ခုစာလောက်ရှိနေပေးပါနော်…
မင်းရဲ့ချစ်ခြင်းကို.. ဒရောသောပါး လိုအပ်နေတဲ့..
with Yin Thueain,Ju Ju San,Snow Queen,Missclassic Yp,Su Lay Nwe,Sea Cat..
Posted By Blogger to လူဗိုလ်ဟူသည် ... at 5/11/2013 12:16:00 PM